प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता र तरङ्गित नेपालीजन
पदमा रहँदा होस् वा पदबाहिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जहिले पनि नेपाली सञ्चार माध्यमका लागि न्यूज म्याटर हुनुहुन्छ । उहाँ राजनीतिको यस्तो सातिर खेलाडी जसको बोली नै हतियार । विपक्षी र आफूलाई मन नपराउनेहरुका लागि उहाँ वचन वाण हान्न खप्पिस हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको वाकपटुताबाट सारा नेपालीजन भलीभाँती छन् ।
यसको सानो नमुना उहाँले हालै भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि प्रस्तुत गर्नुभयो । फलस्वरुप प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक निर्णय गरेर आर्जेको कुख्यातिमा सच्चा राष्ट्रवादी नेताको बर्को लगाउन उहाँ सफल हुनुभयो । आफ्नै पार्टीका नेताहरु प्रति असहिष्णु ओली एकाएक भारत र चीनलाई समेत मिलाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वका रुपमा उदाउनु भयो–उहाँकै साइबर सेनाका सदस्यहरुका अनुसार ।
प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ताले सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हैन नेपाली समाजमा पनि तरङ्ग ल्याएको छ । मानिसहरु भन्न थालेका छन्, ‘भारतसँग यसरी शिर ठाडो पारेर कुरा गर्ने नेता नेपालमा नै थिएन ।’ उहाँको बिरोध गर्नेले पनि ‘यत्तिको बोल्ने प्रधानमन्त्री त देखेका थिएनौं है’ भन्न पर्ने अवस्था आयो । प्रधानमन्त्री ओली व्यक्तिका लागि यो साह्रै सुखद र राम्रो भयो । तर यसबाट मुलुकले के पायो त ? हामीले वादविवादमा खरो उत्रिने नेता मात्रै खोजेका हौं कि देश निर्माण गर्ने सोच र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रधानमन्त्री चाहेका हौं ? हाम्रा ‘प्रधानमन्त्रीले भारतीयहरुको झाँको झार्नु भयो’ के यतिले मात्रै हामीले खोजेको समृद्धि र स्थायित्व आउने हो त ? नेपालको हकमा राष्ट्रवाद भनेकै भारतको सत्तोसराप गर्ने जस्तो भएको छ ।
भारतलाई ओठे जवाफ दिने बितिक्कै कुनै पनि नेता सच्चा राष्ट्रवादी भइहाल्ने हो ? यस्तो खोक्रो राष्ट्रवाद आत्मरतिका लागि मात्रै काम लाग्छ देश विकासका लागि हैन । आफ्नो अनुकूल हुँदा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको प्रशिक्षण लिने र प्रतिकूलतामा भारतसँग हात मिलाउने नीतिले हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हैन बरु कमजोर तुल्याउँदै लान्छ ।
प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्ता दिनका लागि पनि एकदमै विवादित संस्था रोज्नु आफैंमा सन्देहपूर्ण छ । केही समयअघि मात्रै उहाँ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको सम्बन्धलाई उछालेर मनलाग्दी, भ्रामक र तथ्यबाट निकै पर रहेर समाचार पस्किने जी न्यूजलाई महत्वपूर्ण भेट र समय प्रधानमन्त्रीले किन दिनुभयो होला ? आफू अनुकूलका सञ्चार माध्यमलाई भटाभट अन्तर्वाता दिने प्रधानमन्त्री ओली जनताका सवाल उठाउने मुटु भएका सम्पादकसँग किन तर्किनु हुन्छ होला ? वादे वादे जायते तत्वबोध’ अर्थात् कुनै पनि एउटा विचार वा विद्वानको मत नै सदाकालका लागि आधिकारिक नहुन सक्छ र हरेक सवालमा निरन्तर बहस र छलफल गर्दै जाने क्रममा नै तत्वको बोध हुन्छ भन्ने पूर्वीय मान्यता गायत्री मन्त्र, वेदव्यास रामायणबारे लामै प्रवचन दिनसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा नहुने कुरै भएन ।
तर, उहाँ किन यस्ता बहस र छलफलभन्दा पनि उहाँका कुरा सुनेर मुन्टो हल्लाउने पत्रकारलाई मात्रै समय दिनुहुन्छ होला ? आफूले ठानेको र आफूलाई लागेको मात्रै अन्तिम सत्य मान्नेहरु बहस र छलफलबाट भाग्न मन पराउँछन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसदमा जनताका सवालमा सांसदहरुसँग सवालजवाफ गर्न भन्दा एकोहोरो रुपमा आफ्ना कुरामात्रै राख्न किन उहाँ उद्दत हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न शायर्दै अप्ठेरो होला ।
प्रधानमन्त्री ओली एकदमै प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ । उहाँ राम्रो बोल्नु हुन्छ । नभएको कुरालाई पनि उहाँ हो कि क्या हो ? भन्ने गरी सुनाउनु हुन्छ । समस्या उहाँले के बोल्नु भयो र बोल्नुहुन्छ भन्ने पटक्कै हैन । उहाँ एकथोक बोल्नुहुन्छ र अर्कोथोक गर्नुहुन्छ, खाँटी समस्या त त्यही नै हो । संसदको रोष्टममा उभिएर संसद भंग गर्दिन भनेर केही समयअघि बोलेका प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनसक्ने सम्भावना देखेपछि संसद भंग गर्नुचाहिं समस्या हो । अन्तर्वार्तामा उहाँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग हो र त्यसलाई जसरी नि फिर्ता ल्याउँछौ भन्नुहुन्छ । तर, संसदले सर्वसम्मत पास गरेको मुलुकको नक्शालाई पाठ्यपुस्तकबाट हटाउन उर्दी दिनुहुन्छ । भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्नुहुन्छ तर, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीलाई क्याबिनेटमै राखिरहनु हुन्छ ।
अमेरिकी कवि रोजर जोसेफ जेलाज्नी भन्थे,‘कुनै पनि शब्दको महत्व छैन । तर मानिसले वास्तविकता बिर्सन्छ र शब्दहरू मात्र सम्झन्छ।’ शायद हामी नेपाली यस्ता दुर्भाग्यशाली जनतामा पर्छौं जो सधैं कुरामा विश्वास गर्छौं काममा हैन । रुप र सार नबुझी चालिने कदम र लिइने निर्णय वस्तुनिष्ठ हुँदैनन् । हामी पनि अब वस्तुनिष्ठ हुने बेला आइसकेको छ ।